တႈလဲၚတႈက့ၚလ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ | Radio Veritas Asia
Church remembers John Paul II’s historic visit. Photo Credit: asianews.it. 05/11/2009
၂၀၁၉ မ့ႈနံဥလ႕အအိဥဒီး တႈလီၚတိဏလီၚဆီ လ႕ကီႈကေီႈတဲႈ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈ အိဥဖ်ါ၀ဲဒီးနံဥဆဲးဆ႕တႈမၚအသးသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’
ကီႈကေီႈတဲႈဘဥတႈပဏလီၚအီၚဒ္အမ့ႈ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အိဥသူဥလီၚအသးထံကီႈ (Apostolic Vicariate) ပွဲၚထီဥ၀ဲအနံဥ ၃၅၀ယ ဒီးတႈပဏလီၚတႈအံၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ ပႈပါ Clement IX ဖဲ ၁၆၆၉ အနံဥနဥ့လီၚ’ ခီဖ်ိလ႕တႈပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚအံၚအဃိ ရိမ့ႈကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အိဥသူဥလီၚအသးလ႕ ကီႈကေီႈတဲႈအပူၚထီဘိနဥ့လီၚ’ ဒီးဖဲတနံဥဃီအံၚအပူၚ ကီႈကေီႈတဲႈဒီး Vatican ထံကီႈခံဘ့ဥ အတႈရ့လိဏအသး (Deplomatic relation) ပွဲၚထီဥအနံဥ ၅၀ အကတီႈယ ဒ္တႈရ့လိဏသးအံၚ ဘဥတႈစးထီဥတ့ႈလံအီၚ ဖဲ ၁၉၆၉ အနံဥယ မ့ႈစ့ႈကီးပႈပါဎိၚဟဥပီလူခံဂၚတဂၚ အတႈလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈကေီႈတဲႈ ပွဲၚထီဥ ၃၅ နံဥဆ႕က့ၚအလီႈယ ဒီးတႈလဲၚတႈက့ၚအံၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ ၁၉၈၄ အနံဥနဥ့လီၚ’
ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈစူဥတႈနဏ ဘဥတႈဒုးလဲၚတုၚအီၚဆူ ကီႈကေီႈတဲႈ လ႕ Dominican Missionaries အကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဖဲ ၁၅၆၇ အနံဥယ ဒီးဖဲနဥ့အကတီႈ Ayutthaya မ့ႈဒ္၀ဲထံကီႈအ၀့ႈခိဥအကတီႈနဥ့လီၚ’ တႈစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအတႈမၚ ဘဥတႈပဏလီၚအီၚလ႕ ပႈပါ Clement IX (ခြံ) အတႈပ႕တႈၿပးအကတီႈယ ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲ ၁၆၆၉ လါဎူၚ ၄ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ စးထီဥဖဲမုႈနံၚအံၚဒီးဆူညါ ပွၚစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈ (Missionaries) ဒီးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိဎိဎိသ့ဥတဖဥ ဒုးလဲၚႏုႈလီၚ၀ဲ တႈသ့တႈဘဥဒီးတႈသ့ဥညါနဥပ႕ႈလ႕ ကီႈမုႈႏုႈသ့ဥတဖဥ ဆူကီႈကေီႈတဲႈအပူၚ လ႕ထံကီႈအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈယ မ့ႈစ့ႈကီးဃုဏဒီး တႈသးကညီၚမၚစ႕ၚတႈ (Charitable activities) လ႕ပွၚကမ်႕ဥဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’
ဘဥဃးဒီးကီႈကေီႈတဲႈဒီး Vatican ထံကီႈခံဘ့ဥအတႈရ့လိဏအသး အပူၚယ တႈစံဏစိၚတဲစိၚလ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚ လ႕ထံကီႈအစီၚပၚဒီးပႈပါအတႈရ့လိဏဆဲးက်႕လိဏအသး လ႕တႈသူဥအိဥသးအိဥလိဏသးအပူၚ အိဥဖ်ါတ့ႈ၀ဲ စးထီဥလ႕ Ayutthaya အဆ႕ကတီႈလံၚလံၚဘဥဆဥယ ထံကီႈခံဘ့ဥအတႈရ့လိဏမုဏလိဏအသး ဘဥတႈပဏဖ်ါအီၚလ႕တႈလီၚတံဥလီၚဆဲးအပူၚ စးထီဥဖဲ ၁၉၆၉ အနံဥယ ဖဲပႈပါပီလူဃုဂၚတဂၚ အတႈပ႕တႈၿပးအဆ႕ကတီႈယ ဒီးတႈရလိဏသးလ႕တႈသူဥအိဥသးအိဥအပူၚ အါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲနဥ့လီၚ’
ထံကီႈခံဘ့ဥအံၚအတႈပဏဘူးလိဏသး လ႕တႈရ့လိဏမုဏလိဏသးအပူၚ မ့ႈ၀ဲခီဖ်ိလ႕ထံကီႈခံဘ့ဥအပွၚနဥ့စိနဥ့ကမီၚ ခံခီဎဏဘးသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚဟးအိဥသကိးလိဏအသးအဃိနဥ့လီၚ’ တႈလဲၚဟးအိဥသကိးလိဏသးအဆိကတ႕ႈတဘ်ီ ဘဥတႈမၚအီၚလ႕ စီၚပၚ Chulalongkorn the Great (Rama V), ထံဥလိဏအသးဒီးပႈပါ Leo XIII ဖဲ ၁၈၉၇ လါဎူၚ ၄ သီအမုႈနံၚ ဖဲစီၚပၚအံၚလဲၚဟး၀ဲဆူ ကီႈဎူရပၚအကတီႈနဥ့လီၚ’ ပွၚလ႕အထီဥအလီႈ စီၚပၚ Prajadhipok (Rama VII) ဒီးနီႈပၚမုႈ Rambai Barni ထံဥလိဏအသးဒီး ပႈပါပံဥအူ XI ဖဲ ၁၉၃၄ လါမးခေ္ ၂၁ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ လ႕ခံ စီၚပၚ Bhumibol Adulyadej ဒီးနီႈပဏမုႈ Sirikit လဲၚဟး၀ဲဆူ Vaticanယ ထံဥလိဏဘဥအသးဒီး ပႈပါဎိၚဟဥ XXIII ဖဲ၁၉၆၃ လါအီးကထိဘ႕ႈ ၃ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’
မ့မ့ႈလ႕ Vatican တခီယ ထဲဒဥတဘ်ီဧိၚဆူကီႈကေီႈတဲႈ ဘဥတႈမၚအီၚလ႕ ပွးစီဆွံပႈပါဎိၚဟဥပီလူခံဂၚတဂၚ ဖဲ ၁၉၈၄ လါမ့ၚ ၁၀ ဒီး ၁၁ သီအမုႈနံၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ အကတီႈဖဲအံၚ စီၚပၚ Maha Vajiralongkorn လ႕အမ့ႈ၀ဲစီၚပၚဖိ သဂ႕ႈတူဥလိဏ၀ဲပႈပါ လ႕အကစႈဒဥ၀ဲ လ႕ကီႈကေီႈတဲႈအသူးမုႈကဘီဎူၚပ်ီ ဒီးလဲၚဃုဏတႈဒီးပႈပါ ဆူတႈထံဥလိဏသးဒီး စီၚပၚ Bhumibol Adulyadej အဂီႈနဥ့လီၚ’
ဖဲနဥ့အကတီႈ တခ်ဳးလ႕အလုႈထီဥ၀ဲတႈလုႈမံးဆါ လ႕တႈကြႈကီအဒ႕း (National Stadium) အကတီႈ ထံဥလိဏအသးဒီး ကီႈကေီႈတဲႈပွၚ Buddha ဖိအသီခါဖးဒိဥတဂၚလ႕ ထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ ဎူးဎီႈပဏဒိဥအီၚ Ariyavangsagatayana VIII ( Vasana Vasano) နဥ့လီၚ’
ဖဲအလဲၚ၀ဲဆူကီႈကေီႈတဲႈအကတီႈ ပွၚစီဆွံပႈပါဎိၚဟဥပီလူခံဂၚတဂၚ လဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚဘဥကီႈဘဥခဲသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲတႈလီႈ (Amphoe Phanatnikhom in Chonburi Province, ဒီးဆူ Assumption Cathedral, ဆူ St. Joseph’s Seminary at Sampran, ဒီးဆူ Saint Louis Hospital လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok စ့ႈကီးနဥ့လီၚ’
Photo Credit: asianews.it/news